Ku soo dejiso WhatsApp bilaash qalabka oo dhan | Androidsis
WhatsApp waa barnaamijka ugu caansan ee farriimaha deg degga ah ee suuqa laga soo diro, intaasna kuma eka, waxay bedeshay qaabkii aan ula xiriiri jirnay ehelkeenna, saaxiibbadeen iyo kuwa nagu xeeran. Waad ku mahadsan tahay nidaamkeeda isdhexgalka ee buugga taleefoonka, waxay noqotay mid caan noqotay sida dabka dabka oo kale, waana sababta ugu badan ee isticmaaleyaashu, markay helaan Smartphone cusub, waxa ugu horreeya ee ay doonayaan waa inaad ku soo degsato WhatsApp bilaash, si aad ula xiriirto asxaabtaada sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah.
WhatsApp wuxuu la jaan qaadayaa dhamaan nidaamyada mobilada ka shaqeeya, marka laga reebo in uu jiro nooc desktop ah oo si dhaqso leh oo raaxo leh loogu isticmaali karo. Isticmaalayaasha waxay soo diri karaan farriimo, fariimo cod ah, sawirro, xiriiriyeyaal bogga, ama faylal qaabab kala duwan ah.
Mid ka mid ah xulashooyinka badan ee WhatsApp waa abuurista kooxo ilaa 256 qof ah, tiro aad u tiro badan. Suurtagalnimada abuuristooda iyo maamulkooda waa wax iska fudud. Adeegsade kasta wuxuu ku heli karaa iyaga casuumaad ama ay ku darsadaan maamulayaasha.
1 Sida loo soo dejisto WhatsApp bilaash ah
2 Soo Degso WhatsApp APK
2.1 Tallaabooyinka ugu horreeya ee rakibidda
3 Soodejiso GBWhatsapp
4 Soodejiso WhatsApp Aero
5 Soo Degso WhatsApp Transparent
6 Cusboonaysi WhatsApp bilaash ah
Sida loo soo dejisto WhatsApp bilaash ah
Iyada oo casharradeenna fudud waxaan ku bari doonaa sida loo rakibo WhatsApp qalabkaaga oo dhan, si aadan u seegin hal daqiiqad oo aad kula xiriirto:
Ka soo dejiso WhatsApp taleefanka gacanta ee Android
Ku soo dejiso WhatsApp kiniin ahaan
Soo Degso WhatsApp Plus
Kaliya intaas maahan, laakiin waxaan kaa caawinaynaa inaad ku rakibto bilaash. Waxaan xusuusineynaa ka dib markii ay heshay Facebook, shirkadda WhatsApp Inc ay baabi'isay nooc kasta oo lacag ah oo loogu talagalay isticmaalka adeegyadeeda, sidaas darteed, WhatsApp gebi ahaanba waa bilaash.
Soo Degso WhatsApp APK
Bogga rasmiga ah ee WhatsApp wuxuu oggol yahay soo dejinta nooca ugu dambeeya ee codsigan caanka ah oo horeyba u lahaa in ka badan 2.000 milyan oo isticmaaleyaal firfircoon adduunka oo dhan tan iyo markii la aasaasay. Maanta waxaan ku tusinaynaa sida loo soo dejiyo oo loogu rakibo qalabkaaga Android dhowr tallaabo oo fudud.
Soo dejiso waxaan gali doonnaa bogga WhatsApp oo waxaan soo gali doonnaa nooca barnaamijka 'Android platform', guji Download Hadda oo ilbiriqsiyo gudahood waxaan ku haysan doonnaa galka soo dejinta ee taleefankeenna si loogu rakibo hadhow
Si loo rakibo waa inaan u oggolaanno APK-yada in lagu rakibo amniga nidaamka hawlgalka awgood. Si tan loo sameeyo waxaan heli doonnaa «Security» oo ilo aan la aqoon ayaan ka hawlgelinaynaa, Google ayaa ku ogeysiin doonta inaad la kulantay xaqiiqda ah in hawlgalkeedu uusan sax ahayn, laakiin xusuusnow in barnaamijka APK uu yahay midka ay bixiso Google Play Store.
Mar alla markii aad tallaabadaas samayso, isku day inaad mar kale soo dejiso oo waxay u oggolaan doontaa inay u shaqeyso dhibaato la'aan.
Tallaabooyinka ugu horreeya ee rakibidda
Marka la soo dejiyo, waxaan u gudubnaa rakibaadda APK-ka taleefankeenna. Astaanta barnaamijka ayaa ka muuqata desktop-ka qalabka, guji si aad u qaabeyso oo aad farriimo ugu dirto liiska xiriiriyahaaga.
Markuu furmo, waa inaan aqbalnaa shuruudaha adeegga, guji aqbal talaabada xigta.
Xaqiiji lambarka taleefankaaga. Waxay kuu soo diri doonaan PIN si otomaatig ah loo gelin doono. Guji OK ama Next.
Haddii aad hayso nuqul hore oo aad rabto inaad soo celiso, xulo Soo Celinta, haddii kale ka bood tallaabadan.
Ugu dambeyn, qor magacaaga ama naaneystaada si dadku ay kuu aqoonsadaan. Waad ka beddeli kartaa magaca inta jeer ee aad rabto ee ku jira Dejinta arjiga mar dambe, markaa ha ka nixin haddii aad qalad ku gashay.
Markaad gasho magaca ama magac kale, waxaad is weydaarsan kartaa farriimaha asxaabtaada ama dadka aad taqaan.
GBWhatsApp waa mid ka mid ah hababka ugu caansan ee loo yaqaan 'WhatsApp mods WhatsApp' ee loogu talagalay Android. Ka mid ah horumarinteeda waxaa ka mid ah astaamo cusub iyo howlo dheeri ah oo si gaar ah loogu rakibo. Rakibaadda waa wax iska fudud oo waxay nagu qaadan doontaa dhowr daqiiqo in la isticmaalo.
Shaqooyinkeeda la heli karo waxaa ka mid ah in la qarin karo wada sheekeysiga adigoo gujinaya guji fudud. Ikhtiyaar kale ayaa ah inaad awood u yeelatid inaad ku baahiso farriimaha illaa ugu badnaan 600 qof oo ka mid ah liiska xiriirka isla mar. Habka sidoo kale wuxuu noo ogolaanayaa inaan horay u eegno sawirada iyo fiidiyowyada adigoon ku soo dejisan qalabkeena.
Waxay leedahay astaamo aan dhammaad lahayn, waa mid ka mid ah hababka ugu fiican ee aad isku dayi karto oo aad ka faa'iideysan karto dhammaan howlaha dheeraadka ah ee ay ku jiraan soo-saaraha.
GBWassApp Pro Nooca Ugu Dambeeya 2020
Developer: bandhigyada tv-ga
Soodejiso WhatsApp Aero
WhatsApp Aero waa mid ka mid ah hababka in muddo ah u yimid in la sii joogo. Rakiibintu waxay u taagan tahay isbeddel muhiim ah, wixii ka sarreeya oo dhan waxay xoogga saareysaa sharraxaadda waxayna siineysaa natiijo tayo leh. Waxay leedahay shaqooyin la mid ah kuwa kale, laakiin waxaa lagu kala soocayaa qaabeynta dhammeystiran ee barnaamijkaaga WhatsApp mar alla markii aad rakibto.
Hawlaha kale waxaad ku ogaan kartaa dadka booqday boggaaga, ku qari ogeysiiska buluugga ah ee fariinta lagu akhriyo wada hadalka, wax ka beddel farta warqadda wada-hadalkaaga shaqsi ahaan, qari xaaladda Online-ka, iyo xulashooyinka kale
Hawlaha ugu waaweyn iyo astaamaha la heli karo waxaa ka mid ah:
Xakamaynta xulashooyinka gaarka ah
Suurtagalnimada inaad soo dejiso mawduucyo cusub
Fursado badan oo ku saabsan soo dejinta faylka
Degso xiriiriyaha: Soodejiso WhatsApp Aero
Soo Degso WhatsApp Transparent
Transparent WhatsApp waa qaab ku saleysan codsiga rasmiga ah ee WhatsApp. Waxay kuu ogolaanaysaa inaad astaysto dhammaan interface-ka si fudud oo ikhtiyaarro badan oo dheeri ah loo heli karo marka aad rakibto nooca ugu dambeeya. Waxaad u arki kartaa darbiga taleefanka inuu yahay interface ama u qaabeyn karo inuu ku tuso sawir kale.
Sida magaceedaba ka muuqata, Transparent WhatsApp ayaa u adeegta sameynta isticmaalka barnaamijka aad u fudud oo aan tartiib tartiib ah u sameynaynin aaladda. Kudar emoticons cusub iyo emojis si aad sheekooyinkaaga uga dhigto mid xiiso badan. Hawlaha kale ee muhiimka ah si loo muujiyo waxaa ka mid ah in la soo diro faylal gaaraya 1 GB ama in ka badan 100 sawir ama sawirro hal mar ah.
Cusboonaysi WhatsApp bilaash ah
Isla kiisku wuxuu ku dhacaa cusboonaysiinta WhatsApp, laga yaabee, maxaa yeelay maad cusbooneysiin noocaaga WhatsApp muddo dheer, dalabku wuxuu kaa codsanayaa inaad cusboonaysiiso adeegga, si kastaba ha ahaatee, hadda cusbooneysii WhatsApp waa bilaash waligiisSidaa darteed, uma baahnid inaad cusbooneysiiso akoonkaaga WhatsApp adoo bixinaya lacag si aad marwalba u isticmaali karto. Haddii ay dhacdo in dalabku codsado cusbooneysiin, waa inaad la xiriirtaa adeeg bixiyahaaga si aad cusbooneysii whatsapp, ama loo maro Google Play Store ama Apple App Store. Weligeed sidan uma sahlaneyn oo raqiis in loo isticmaalo WhatsApp sida ay hadda tahay, ee ka faa'iideyso.